waxbarashada Professional ee Hindiya ayaa la siiyey badan oo muhiimadda ay leedahay in dhowrkii sano ee la soo dhaafay. Hindiya waxay leedahay taariikh ah oo aan la si horumarsan marka la eego waxbarashada sare. Laakiin wejiga in uu si guul leh ay ka gudbaan. Dad badan oo jaamacadaha ayaa sidoo kale la sameeyay dhawaan, kuwaas oo soo saara xirfadaha caalamiga ah. Qaybta Northern of India ayaa helay badan oo jaamacadaha sida, sida hoos ku xusan.
Waxaan kufaraxsanahay University Professional
Waxaan kufaraxsanahay University Professional waa mid ka mid ah jaamacadaha ugu qiimaha jooga North India. Waxaa ku yaalla Jalandar. Waxaa la aqoonsanayaa taxanaha by Guddiga Deeqaha University, Dawladda ka mid ah jirka Hindiya. Waxa kale oo uu leeyahay mid ka mid ah xarumaha hugest. Waxay leedahay xarunta ardayga, dhulka cricket a, shaybaar Mac, ah iwm shaybaarka duulista. Si aad u hesho ogolaanshaha ee barnaamijyada kala duwan ee LPU, mid ka mid ah waa in ay crack LPUNEST. LPUNEST waa LPU ee Entrance iyo Deeqda Test Qaranka. Taasi waxay u keentay sida aasaas u ah xaq u yeelashada barnaamijyada qaarkood oo deeq waxbarasho ugu iyaga ka mid ah. Waxaad iska diiwaan gelin kartaa online for LPUNEST. feature cajiib ah oo LPUNEST waa in xarumaha baaritaanka ay ku baahsan 50 dal iyo 140 magaalo Hindiya.
University of Delhi, kuwaas oo qaab gaaban waxaa du dib u bilaabay in 1922. Waxaana ay ku aaddan badan oo college hoos horyaalka “Delhi University” sida koleejka St Stephen ee, Hindu College, Ramjas college iwm. Jaamacadda ayaa ka dib ka dibna koray badan. Waxaa ku saabsan tahay 86 waaxaha tacliimeed, 77 kulliyadaha iwm. Waxay leedahay campus North a, campus South a, campus Bariga iyo campus galbeed ah. Waxaana ay ku aaddan tiro balaadhan oo ah nidaamo waxbarsho oo wanaagsan sida farshaxanka, farshaxanka, cilmiga caafimaadka, cilmiga xisaabta iwm.
AKHRI SIDOO KALE: Sida loo hagaajiyo FASALADA AAD EE COLLEGE?
Jawaharlal Nehru University ayaa waxaa ka bilowday 1969. Waxaa kaalinta sare iyo jaamacad waa quruxsan sharfay. Golaha Qiimaynta iyo Aqoonsiga Qaranka tababarka jaamacadda 3.9 on 4. Weliba mar kale ku yaal Delhi, waxay siinaysaa jidka fikradaha cajiib ah sababtoo ah halka ay xooga on cilmi ku salaysan farshaxanka deeqsi iyo tacliinta sare ee xirfadaha. Waxay leedahay wax badan oo siyaasadda arday jooga, kaas oo noqon lahaa qofka aad sida galay qofka hadda uu leeyahay aragti ka badan guud ahaan ku wajahan arrimaha ka dhacaya adduunka oo dhan.
Birla Institute of Technology iyo Science
Gelinno waa jaamacad arko la 15 waaxaha tacliimeed. Waxaa ku takhasusay waxbarashada undergraduate in durdurrada sida injineernimada, sayniska iyo maamulka. Waxa kale oo ay bixisaa barnaamijyo degree in dhismaha ay ku Goa iyo Hyderabad. Waa mid ka mid ah machadyada sare ee Hindiya waxbarasho sare. jaamacad ma qaaddeen xaddido barnaamijyada bachelor laakiin sidoo kale daboolayaa barnaamijyada degree sare sida M.E, M.Pharm, MBA iwm. BITSAT waa imtixaan laga galo online in aad looga baahan yahay in crack si aad u hesho oggolaanshaha ee machadka / jaamacadda.
University Panjab waxa uu ku yaalaa Chandigarh iyo waa mid ka mid ah jaamacadaha ugu faca weyn ee Hindiya ilaa taariikhda. Waxay ka kooban tahay in ka badan 70 waaxaha quduuska ah cilmiga iyo cilmi-baarista iyo 15 xarumaha Joogaan xarunta weyn. Iyada oo ay goobjoog ka ahaayeen in ka badan 180 kulliyadaha xiriir la dul fidiyey degmooyinka Punjab, waxay bixisaa xirmo ah doorashooyin ku xiran badan sida farshaxanka, ganacsiga, farshaxanka, waxbarasho, injineernimada, luqadood, sharciga, cilmiga caafimaadka iwm.
On ku salaysan baridda, cilmi, darajeeyo, campus iyo kaabayaasha, kuwanu waa 5 jaamacadaha ugu sareeya Waqooyiga Hindiya.
AKHRI SIDOO KALE: Qalad Common About Helitaanka Job a dib markii College
5 Talooyin College Waayeelka Raadinta ay Job First
« Story koritaanka of Mobile boorsooyinka ka dib markii Demonetization
maalin Happy Australia 2018 Rajo, Quotes, SMS, Messages, Images, dharka »